Kenya: Al-Shabaab ka nabad geli meyno xitaa aan haddii aan ciidankeena kala soo baxno Somalia”
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyaata ayaa sheegay in dalkiisa uusan ka nabadgali doonin Weerada Al-Shabaab xitaa hadii Ciidamadooda ay kala baxaan Soomaaliya.
Kenyatta ayaa hadalkan jawaab uga dhigay baaq kasoo baxay Mucaaradka dalkaas oo ahaa in Ciidamada Kenya laga saaro Soomaaliya si Al-shabaab ay u joojiso weerarada ay dalkooda ka wado.
Madaxweynaha Kenya ayaa intaa ku daray weerarada Shabaab ka fulinyaan meelo ka mid ah gudaha Kenya aysan sabab u noqon doonin inay ciidankooda kala baxaaan Somalia.
“Maanta Ciidamada haddii aan kala soo baxno Soomaaliya maxaa damaanad qaad ah oo aad heysataa inaad amaan heleysid Al-shabaab waa koox argagaxiso ah oo aan heshiis lala geli karin waqti un Kenya Ciidamadeeda wey kala baxeysa Somalia, waa markii Somaaliya ay xasilooni hesho ,marka ay sameystaan Dowlad awooda inay ilaaliso dhulkeeda iyo dadkeeda” ayuu intaa ku daray madaxweynaha Kenya.
Uhuru Kenyatta ayaa sheegay iney Al-shabaab ay bilaabeen iney gudaha Kenya weeraro ka geystaan sanado ka hor inta aysan ciidanka Kenya gelin gudaha Somalia taasina ay daliil u tahay in Al-shabaab aysan kala jecleyn in ciidamada Kenya ay sii joogaan Somalia iyo iney ka baxaan.
Kenya ayaa bishii Oktobar ee sanadkii 2011 kumanaan askari soo galisay Somaaliya iyagoo ka jawaabayay weeraro ay Shabaab dalkaasi ka geysteen waxaana markii dambe ay ku biireen howlgalka AMISOM.